सोह्रश्राद्धमा भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम, के गर्ने र के नगर्ने ? - Recent Nepal News
सोह्रश्राद्धमा भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम, के गर्ने र के नगर्ने ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र २१, २०७४ समय: ११:१८:४९
काठमाडौं — आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका १६ दिनसम्म गरिने सोह्रश्राद्ध आजदेखि सुरु भएको छ । प्रतिपदादेखि १६ तिथिमध्ये जुन तिथिमा आफ्ना पिताको निधन भएको हो, सोही दिन सोह्रश्राद्ध गर्ने गरिन्छ । आश्विन कृष्ण पक्षलाई पर्व मानिएको छ । पर्व तिथिका अवसरमा गरिने श्राद्ध भएकाले यसलाई पारवन वा महालय श्राद्ध पनि भनिन्छ ।